Galaxy S6 na S6 ihu, ahịa na Korea anaghị arụ ọrụ | Gam akporosis
Izu ole na ole ugbu a, Samsung ejirila ọdụ Samsung ọhụụ azụta ahịa dị iche iche. Otu n'ime ahịa ndị a bụ Korean na kpomkwem n'ahịa a, lIhe ohuru nke Galaxy S6 na S6 Edge na-ere n'okpuru ihe ndi mmadu choro na South Koreao.
O doro anya na ngwaọrụ ndị ọhụrụ dọtara uche nke ndị ọrụ dịka pịa nke mpaghara ahụ. Karịsịa S6 ihu na ya na ihuenyo ya na-amalite mmalite ọhụrụ site na iji akara na ime ihe ike karịa Galaxy S6 ma ọ bụ obere ụmụnne.
Dị ka mara mma dị ka ọnụ, ọ pụtaghị na ọ na-ere nke ukwuu na nke a bụ kpọmkwem ihe na-eme Samsung. N'ụzọ doro anya, mgbe ụlọ ọrụ na-eweta ngwaọrụ, ọ nwere atụmanya ire ahịa nke a na-ezute mgbe ụfọdụ na mgbe ụfọdụ. Ebe ọhụrụ a anaghị ere dị ka ndị Korea tụrụ anya ya, dị ka akwụkwọ akụkọ Korea, Korea Herald si kwuo.
Na mgbasa ozi kwuru, ọ na-akọ na Samsung ga-ezute ụfọdụ nsogbu ahịa na ahịa nke ya, ahịa Korea. Yabụ, n'ụbọchị izipu ngwaọrụ abụọ ahụ, Samsung nwere ike ire ihe dị ka puku 200.000 ma e jiri ya tụnyere ndapụta 300.000 emere ya mgbe onye nrụpụta mepere nhọrọ ahụ. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi n'eziokwu na ahịa Korea jupụtara na ngwaọrụ mkpanaka yana iwu mmachi ọhụụ abanyela iji luso asọmpi na-ezighi ezi n'etiti ndị ọrụ dị iche iche na-arụ ọrụ n'ahịa ahụ.
Ọ bụ ezie na Samsung na-ekpuchi ọtụtụ ahịa ndị ọzọ na nke ahụ na-eme ka ahịa nke ngwaọrụ ndị a dịkwuo mma, nke ga-adị gburugburu dịka akụkọ na-akwadoghị. n'etiti 50 na 70 nde nkeji rere N'etiti ngwaọrụ abụọ a n'afọ a, ya mere n'ozuzu, ahịa nke Galaxys ọhụrụ ahụ abụghịkwa ọnụ ọgụgụ dị njọ, mana ọ bụ eziokwu na ahịa Korea agbadatala ọnụ ọgụgụ ndị a tụrụ anya nke nkeji ha rere na Samsung.
Thatbụ na dị ka ọ nwere ike, o doro anya na Samung bụ otu n’ime ihe ndị kasị mkpa na-emepụta nke ekwentị mkpanaaka na gam akporo na otu n’ime ndị na-emepụta na-ere kasị smartphones na ụwa. Nke a pụtara na asọmpi ahụ etinyela batrị na mpaghara niile nke gam akporo iji wepu òkè ahịa na onye nrụpụta Korea a. Samsung ugbu a nwere nsonaazụ dara ogbenye na-egwu n'ụlọ, anyị ga-ahụ na njedebe nke afọ ma ọ bụrụ na ọ laghachi azụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Galaxy S6 na S6 Edge anaghị ere ihe Samsung chere
Ha na? Saịtị niile na-ekwu na ọ na-aza na m na-ekwu na ọ bụ ụgha na ọ bụ ụgha malitere ịrịa mgbasa ozi na ugbu a anya
Nkeji edemede nwere isi okwu na-eduhie eduhie, ọ tụgharịrị na mgbe ị gụsịrị ederede ahụ, na dequeism na ụfọdụ idehie okwu karịa nke ọzọ: Korea ha erewo puku 200 nke 300 puku na-echekwa na enwerekwa ọnọdụ ole na ole nke ahịa ahụ, n'etiti ndị ọzọ karịa ihe nwere ike ịlụ agha nke ị intoụbiga mmanya ókè nke obere akwụkwọ na-erughị ala a na-ere na akara , Samsung, LG (na Korea) na Apple dị na US ma ọ bụ obodo ọ bụla ọzọ. Ndị kpọrọ asị na ọrụ, na nke a sitere na Samsung, ga-eme nke ọma ichere ọnwa ole na ole tupu ha etinye egwu.
Zaghachi Ana Paula VALDIVIESO
Ọfọn, ha amaghị ihe ha na-efu.
Ekwenyere m ịkwụ ụgwọ euro 150 karịa maka ọnụ nke na-enyere obere ntakịrị karịa bụ ịtụgharị uche na ya
Zaghachi Sigi Arias
Edemede a bụ nke adịgboroja na nke nzuzu.
Samsung s6 na s6 ihu na-ere oke, lee ka akwụkwọ a si bụrụ nzuzu!
Samsung bụ ụlọ ọrụ teknụzụ kacha mma !!!
Kedu ihe nzuzu nke edemede a kwuru, ọ bụrụ na ọ na-agbasa n'ahịa!
Hay Day na-enweta ọhụụ ọhụụ na ndozi ndozi, anụ ụlọ ọhụrụ na ọtụtụ ndị ọzọ